Levitikọs 16 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
16 Jehova wee gwa Mozis okwu mgbe ụmụ Erọn abụọ nwụsịrị bụ́ ndị nwụrụ n’ihi na ha bịara n’ihu Jehova n’ụzọ na-ekwesịghị ekwesị.+
2 Jehova wee gwa Mozis, sị: “Gwa Erọn nwanne gị nwoke na ọ bụghị mgbe niile ka ọ ga na-abata n’ebe nsọ,+ n’ime ákwà mgbochi ahụ,+ n’ihu ihe mkpuchi e ji kpuchie Igbe ahụ, ka ọ ghara ịnwụ;+ n’ihi na m ga na-apụta n’ígwé ojii+ n’elu ihe mkpuchi ahụ.+
3 “Erọn ga-eji ihe ndị a na-abata n’ebe nsọ:+ nwa oké ehi maka àjà mmehie+ na ebule maka àjà nsure ọkụ.+
4 Ọ ga-eyiri uwe mwụda dị nsọ nke e ji ákwà linin mee,+ ọ ga-eyirikwa uwe úkwù e ji linin mee,+ ọ ga-eke ákwà e ji linin mee n’úkwù+ ma kee ákwà e ji linin mee n’isi.+ Ha bụ uwe dị nsọ.+ Ọ ga-asa ahụ́ na mmiri+ wee yiri ha.
5 “Ọ ga-anata nzukọ ụmụ Izrel+ ụmụ mkpi abụọ maka àjà mmehie+ na otu ebule maka àjà nsure ọkụ.+
6 “Erọn ga-achụ oké ehi àjà mmehie, nke bụ́ maka onwe ya, n’àjà,+ ọ ga-ekpuchikwara+ onwe ya mmehie ya,+ kpuchiekwara ụlọ ya.+
7 “Ọ ga-akpụrụ mkpi abụọ ahụ mee ka ha guzo n’ihu Jehova n’ọnụ ụzọ ụlọikwuu nzute.
8 Erọn ga-efe nza+ maka mkpi abụọ ahụ, otu nza ga-ama nke ga-agara Jehova, nza nke ọzọ ga-ama nke ga-agara Azezel.+
9 Erọn ga-achụ mkpi nke nza maara+ Jehova n’àjà, ọ ga-eme ka ọ bụrụ àjà mmehie.+
10 Ma, a ga-eme ka mkpi nke nza maara Azezel guzo n’ihu Jehova ná ndụ ka e were ya kpuchie mmehie, ka e wee kpụga+ ya n’ala ịkpa+ maka Azezel.
11 “Erọn ga-eweta oké ehi àjà mmehie ahụ, nke bụ́ maka onwe ya, wee kpuchiere onwe ya mmehie ya, kpuchiekwara ụlọ ya; ọ ga-egbukwa oké ehi àjà mmehie ahụ, nke bụ́ maka onwe ya.+
12 “Ọ ga-ewere ihe ịgụ ọkụ+ nke a gụjuru icheku ọkụ nke si n’ebe ịchụàjà+ nke dị n’ihu Jehova, tinyere ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ+ o kpojuru aka ya abụọ,+ ọ ga-ewebatakwa ha n’ime ákwà mgbochi ahụ.+
13 Ọ ga-awụsakwa ihe nsure ọkụ ahụ na-esi ísì ụtọ n’elu ọkụ ahụ n’ihu Jehova,+ anwụrụ ọkụ nke ihe nsure ọkụ ahụ na-esi ísì ụtọ ga-ekpuchi ihe mkpuchi Igbe ahụ,+ bụ́ nke dị n’elu Ihe Àmà ahụ,+ ka ọ ghara ịnwụ.
14 “Ọ ga-eweretụ ọbara oké ehi+ ahụ ma jiri mkpịsị aka ya fesa ya n’ihu ihe mkpuchi ahụ n’akụkụ ebe ọwụwa anyanwụ, ọ ga-ejikwa mkpịsị aka ya fesa+ ọbara ahụ ugboro asaa n’ihu ihe mkpuchi ahụ.+
15 “Ọ ga-egbu mkpi àjà mmehie ahụ, nke bụ́ maka ụmụ Izrel,+ ọ ga-ewebata ọbara ya n’ime ákwà mgbochi+ ahụ ma were ọbara ya+ mee otu ihe ahụ o ji ọbara oké ehi ahụ mee; ọ ga-efesakwa ya n’ihu ihe mkpuchi ahụ.
16 “Ọ ga-ekpuchi mmehie nke ebe nsọ ahụ n’ihi adịghị ọcha+ nke ụmụ Izrel nakwa n’ihi nnupụisi ha na mmehie niile ha;+ otú ahụ ka ọ ga-eme maka ụlọikwuu nzute, bụ́ nke dị n’etiti ha n’adịghị ọcha ha.
17 “Mmadụ ọzọ agaghị anọ n’ụlọikwuu nzute ahụ malite n’oge ọ banyere n’ebe nsọ ahụ ịga kpuchie mmehie ruo mgbe ọ pụtara; ọ ga-ekpuchiri onwe ya mmehie ya,+ kpuchiere ụlọ ya, kpuchiekwara ọgbakọ Izrel dum.+
18 “Ọ ga-apụta gaa n’ebe ịchụàjà ahụ,+ bụ́ nke dị n’ihu Jehova wee kpuchie mmehie ya, ọ ga-eweretụ ọbara oké ehi ahụ na ọbara mkpi ahụ tee ya na mpi ebe ịchụàjà ahụ gburugburu.+
19 Ọ ga-ejikwa mkpịsị aka ya fesa+ ọbara ahụ n’elu ya ugboro asaa wee mee ka ọ dị ọcha, dookwa ya nsọ pụọ n’adịghị ọcha nke ụmụ Izrel.
20 “Mgbe o kpuchisịịrị ebe nsọ ahụ na ụlọikwuu nzute ahụ na ebe ịchụàjà ahụ mmehie,+ ọ ga-akpụta mkpi ahụ dị ndụ.+
21 Erọn ga-ebikwasị aka ya abụọ+ n’isi mkpi ahụ dị ndụ wee kwupụta+ njehie niile+ nke ụmụ Izrel na nnupụisi niile ha na mmehie niile ha+ n’isi ya, ọ ga-eme ka ha dịrị n’isi mkpi ahụ+ ma mee ka nwoke nọ na-echere+ kpụrụ ya kpụga n’ala ịkpa.+
22 Mkpi ahụ ga-eburu njehie niile ha+ banye n’ọzara,+ ọ ga-akpụga mkpi ahụ n’ala ịkpa.+
23 “Erọn ga-abata n’ụlọikwuu nzute wee yipụ uwe linin ahụ o yi mgbe ọ banyere n’ebe nsọ ahụ, ọ ga-awụsa ha n’ebe ahụ.+
24 Ọ ga-asa ahụ́ na mmiri+ n’ebe dị nsọ+ ma yiri uwe ya+ pụta chụọ àjà nsure ọkụ nke ya+ na àjà nsure ọkụ nke ụmụ Izrel+ wee kpuchiere onwe ya mmehie ya, kpuchiekwara ụmụ Izrel mmehie ha.+
25 Ọ ga-esure abụba nke anụ àjà mmehie ahụ n’ọkụ n’elu ebe ịchụàjà.+
26 “Ma onye+ ahụ nke kpụpụrụ mkpi ahụ maka Azezel+ ga-asụ uwe ya, ọ ga-asa ahụ́ na mmiri,+ e mesịakwa, ọ ga-abata n’ebe unu mara ụlọikwuu.
27 “Otú ọ dị, ọ ga-ahụ na e bupụrụ oké ehi àjà mmehie ahụ na mkpi àjà mmehie ahụ, bụ́ ndị e bubatara ọbara ha n’ebe nsọ maka iji kpuchie mmehie, ná mpụga ebe unu mara ụlọikwuu; ha ga-akpọ akpụkpọ ha na anụ ha na nsị ha ọkụ.+
28 Onye kpọrọ ha ọkụ ga-asụ uwe ya, ọ ga-asa ahụ́ na mmiri, e mesịakwa, ọ ga-abata n’ebe unu mara ụlọikwuu.
29 “Ọ ga-abụrụ unu ụkpụrụ na-adịru mgbe a na-akaghị aka:+ N’ọnwa nke asaa, n’abalị iri n’ọnwa ahụ,+ unu ga-emekpa mkpụrụ obi unu ahụ́,+ unu arụla ọrụ ọ bụla,+ ma nwa afọ ma onye mbịarambịa nke bi dị ka ọbịa n’etiti unu.
30 N’ihi na ọ bụ n’ụbọchị ahụ ka a ga na-ekpuchiri unu mmehie+ unu iji kwupụta na unu dị ọcha. A ga-asachapụ mmehie unu niile n’ihu Jehova.+
31 Ọ bụ ụbọchị izu ike,+ nke a ga-ezu naanị ike na ya, unu ga-emekpakwa mkpụrụ obi unu ahụ́. Ọ bụ ụkpụrụ ga-adịru mgbe a na-akaghị aka.
32 “Onye nchụàjà a ga-ete mmanụ+ bụ́ onye a ga-enye ikike ịrụ ọrụ dị ka onye nchụàjà,+ dị ka onye ga-anọchi+ nna ya, ga na-ekpuchi mmehie, ọ ga-eyirikwa uwe ndị ahụ e ji linin mee.+ Ha bụ uwe dị nsọ.+
33 Ọ ga-ekpuchiri ebe nsọ ahụ mmehie,+ ọ ga-ekpuchikwara ụlọikwuu+ nzute ahụ na ebe ịchụàjà+ ahụ mmehie; ọ ga-ekpuchikwara ndị nchụàjà mmehie ha, kpuchiekwara mmadụ niile n’ọgbakọ ahụ.+
34 Nke a ga-abụrụ unu ụkpụrụ na-adịru mgbe a na-akaghị aka,+ iji na-ekpuchiri ụmụ Izrel mmehie niile ha otu ugboro kwa afọ.”+
O wee mee nnọọ dị ka Jehova nyere Mozis n’iwu.
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D3%26Chapter%3D16%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl